Pokhara -- HOT and wet
Topic: Pokhara -- HOT and wet
Author Topic: Pokhara -- HOT and wet (Read 9545 times)
« on: April 21, 2015, 06:25:52 AM »
अहिले पोखरामा रमाइलोको नयाँ बहाना जन्मिएको छ। स्विमिङ पुलमा गरिने डान्सपार्टीमा यहाँका युवायुवती आकर्षित भएका छन्। उनीहरू पानीमा आफ्ना जवानीका उमंग र जोश पोखिरहेका छन्। उनीहरू स्विमिङ पुलमा गरिने डान्सपार्टीमा मस्त हुन थालेका छन्। विशेषगरी, युवतीहरू उत्तेजक पहिरन र हाउभाउमा पानीसँग खेलिरहेका हुन्छन्। उनीहरूलाई साथ दिन्छन् युवाले। लेकसाइडका डिस्कोमा सीमित उनीहरू स्विमिङ पुलमा पोखिन्छन् आजभोलि। उन्मुक्त पारामा आफ्नो जवानी पोखिरहेका भेटिन्छन् उनीहरू। अनि, कोभन्दा को कम शैलीमा आफूलाई सेक्सी, आकर्षक र उत्तेजक देखाइरहेका हुन्छन्, किशोरी र युवतीहरू।
पार्टीमा सबै बेपर्वाह हुन्छन्। कसैलाई कसैको मतलव र वास्ता हुँदैन। 'यहाँ त केटीहरूमा सेक्सी देखिने होड नै चल्छ,' पोखरीमा हाम फाल्न ठिक्क परेका अर्जुन थापा भन्दै थिए, 'केटीहरूसँग पौडिन पाउँदा गजबको आनन्द हुन्छ।'
यस्ता पार्टीमा युवायुवतीको भीड थामिनसक्नु हुन्छ । गर्मी छल्ने बहाना बनेका छन्, पुल पार्टी। विदेशतिर सामान्य मानिने बिकिनी पार्टी पनि गर्न थालेका छन्, पोखरेलीले। यस्ता पार्टीमा एकअर्कालाई अँगालोमा बेर्दै चुम्बन लिनेहरू पनि देखिन्छन्। 'स्विमिङ पार्टीको मजा भनेकै यही हो, जहाँ निर्धक्क पानीमा रम्न पाइन्छ,' निकिता पुनले भनिन्।
पुलको छेउमै विदेशी संगीतको तालमा झुम्नेहरू गर्मी महसुस हुनेबित्तिकै पोखरीमा हाम फाल्छन्। आ–आफ्ना ग्याङ बनाएर छाप्लाङ र छुप्लुङ गर्नेहरूको दृश्य हेर्नलायक हुन्छ। हातमा बियर र वाइनको गिलास लिएर एकआपसमा अँगालोमा बाँधिएर मस्तराम हुनेहरू पनि उत्तिकै भेटिन्छन्। डिस्को थेकमा गरिने पार्टीहरू पुलमा गर्न थालेपछि पोखरा रमाइलो बन्दै गएको बताउँछन् उनीहरू। ' स्विमिङ पार्टी सकेसम्म नछुटाउने राम तामाङले भने, 'संगीतको तालमा पानीमा उफ्रिनुको मजा बयान गर्न नसकिने हुन्छ।'
उसो त उत्तेजक पहिरनमा पोखरीमा पार्टीमा समावेश हुने युवतीहरूलाई पारिवारिक बन्देज नभएको होइन। तर, घरपरिवारका आँखा छलेर यस्तो पार्टीमा पुग्ने धेरै छन्।
मोडल रेखा पुरीलाई यस्तो पार्टी हेर्दा खुब रमाइलो लाग्छ। 'मलाई पनि यस्तो पार्टीमा जान रमाइलै लाग्छ' उनी भन्छिन्, 'जहाँ उन्मुक्त पारामा रमाइरहेका युवायुवतीको अनेकन चर्तिकला हेर्न पाइन्छ।'
C11.jpg (81.73 kB, 600x474 - viewed 234 times.)
Re: Pokhara -- HOT and wet
« Reply #1 on: April 21, 2015, 06:28:31 AM »
« Reply #2 on: July 02, 2015, 11:36:12 PM »
« Reply #3 on: July 03, 2015, 09:54:11 PM »
are these photos copyrighted? If the photographer is here, can we use it??